Soo-saarka Shiinaha ee Warshad-aan-nuugi karin | Weirui
1. Nylon Monofilament Monofilament, synthetic, tolmo aan la nuugi karin, midab madow, buluug ama midab ah. Waxaa laga helay isugeynta polyamide 6.0 iyo 6.6 oo leh dhexroor isku mid ah. Dareenka unugyada ayaa ugu yar. Nylon waa shey aan la nuugi karin oo waqti leh, oo ay kuxirantahay isku xirnaanta ...
Monofilament, synthetic, tolmo aan la nuugi karin, midab madow, buluug ah ama aan la dilin.
Waxaa laga helay isugeynta polyamide 6.0 iyo 6.6 oo leh dhexroor isku mid ah.
Dareenka unugyada ayaa ugu yar.
Nylon waa shey aan la nuugi karin oo waqti kadib, ku xardhan unugyada isku xira.
Waxaa la ogyahay in cufka dunta uu yaraanayo, qiyaastii 10% sanadkii sababo la xiriira dillaaca xiriirada kiimikada ee loo maro falalka hydrolytic.
Koodhka midabka: Calaamadda cagaaran （PANTONE 360C）.
Caadi ahaan waxaa loo isticmaalaa marka laga hortago unugyada ku jira Qalliinka neerfaha, indhaha iyo caaga.
Asal ahaan dabiici ahaaneed mate tayo sare oo asal ah ral INERT.
Gurguuran aad u fiican.
Monofilament (hal milimitir gage).
Taageerada ilaalinta irbadda
Cirbadaha si sax ah loo afeeyey ee qalliinka aadka u takhasuska badan (Qalitaanka Indhaha, Qalliinka Caaga ah).
Midab buluug ah.
General, Gynecology, Obstretrics, Ophthalmic, Neurology, Qalliinka micro-vascular peripheral, orthopedics iyo qalliinka guud.
Dhakhtarka qalliinka wuxuu ku kalsoonaan karaa habraacyada halka aan la nuugi karin, tolmo hal-dhejis ah oo xoog xoog liita leh lagugula talinayo, haddii dhakhtarka qalliinka ogyahay astaamaha, faa iidooyinka iyo xaddidaadaha maaddadan tolida ah isla markaana ku dabaqaya qalliin wanaagsan.
Sintetik, aan la nuugi karin, tolid monofilament ah.
Lagu soo saaray fiilo leh dhexroor kumbuyuutar kontaroolo.
Polypropylene-ka ku jira vivo ayaa si aan caadi ahayn u deggan; ku habboon fulinta ujeeddadeedda oo ah taageero joogto ah, iyada oo aan la yeelin xooggeeda jilibka.
Koodhka midabka: sumadda buluugga ah （PANTONE 652C）.
Had iyo jeer loo isticmaalo in lagu wajaho unugyada meelaha gaarka ah. Nidaamka Cuticular iyo Cardiovascular ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan.
Aan la nuugi karin.
U adkaysiga foorarsiga soo noqnoqda
Toos u yeel cirbadaha mudnaanta leh.
Cirbado gaar ah oo loogu talagalay qalliinka wadnaha iyo xididdada (eeg warbixinta cirbadaha).
Qalliinka Wadnaha, Wadnaha Dib-u-dhiska, Qalitaanka Cuticular, Ginecology iyo Obstetretics, Lafaha iyo Qalliinka Guud.
Isticmaalayaashu sidoo kale waxay si kalsooni leh ugu isticmaali karaan nidaamyadaas halkaasoo lagu talin karo mid aan la nuugi karin, hal xaraf iyo tolmo farsamaysan oo xoog badan oo silig ah, iyadoo la oggol yahay inuu adeegsadaha ogyahay astaamaha, faa'iidooyinka iyo xaddidaadda maaddada istiraatiijiga ah oo uu adeegsanayo tababar qalliin oo wanaagsan
3. Polyester tidcan
Synthetic, aan la nuugi karin, multifilament,
Midab cagaaran ama cadaan ah.
Isku-darka polyester ee terephthalate leh ama dabool la'aan.
Sababta oo ah asal ahaan dardaro aan la nuugi karin, waxay leedahay falcelinta unugyada ugu yar.
Waxaa loo adeegsaday qanjirada unugyada iyadoo ay ugu wacan tahay dabeecad ahaan xoog sarreysa.
Koodhka midabka: Calaamadda cagaaran （PANTONE 3288C）.
Had iyo jeer loo isticmaalo Qalliinka Gaarka ah oo ay ku jiraan Wadnaha iyo Wadnaha iyo 'Opthtalmic' sababtoo ah iska caabbinta sare ee foorarka soo noqnoqda.
U adkaysiga jilicsanaanta soo noqnoqda
Kala Bixinta Tidcan ..
Waxaa lagu muujiyaa habraacyada halka lagu taliyey in la isticmaalo silsilad tidcan oo aan tolmo lahayn oo la nuugo. Kuwaas waxaa ka mid ah: Qalliinka Wadnaha, Qalliinka indhaha iyo qalliinka guud.
Isticmaalayaashu sidoo kale waxay si kalsooni leh ugu isticmaali karaan habraacyadaas halkaasoo lagu talin karo wax aan la nuugi karin, multifilament iyo tolmo isku dhafan oo xoog xoog leh, marka la eego in adeegsaduhu ogyahay astaamaha, faa'iidooyinka iyo xaddidaadaha maaddadan tolidda oo adeegsanaya habdhaqan qalliin oo wanaagsan.
Dabiici ah, oo aan la nuugi karin, iskudhafnaan badan, tolmo dhejis ah.
Midab madow, cadaan iyo buluug ah.
Waxaa laga soo helay qumbaha Gooryaanka Bombyx Mori I.
Falcelinta unugyada ayaa noqon karta mid dhexdhexaad ah.
Xiisadda ayaa la ilaaliyaa illaa waqtiga inkasta oo ay hoos u dhacdo illaa inta nudaha unugyadu dhacayaan.
Koodhka midabka: sumadda buluugga ah （PANTONE 2995C）.
Had iyo jeer loo isticmaalo isku dhaca unugyada ama isku xirnaanta marka laga reebo habka urologiga. Astaamaha:
Wax cayriin tayo sare leh.
Mawjadaha Multifilament ..
Midab madow (dun leh silikoon).
Qalliinka Guud, Gastroentelorogy, Opthalmology, Gynecology and Obstretrics.
Dhakhtarka qalliinka ayaa si kalsooni leh ugu adeegsan kara nidaamyadaas meesha aan la nuugi karin, multifilament iyo tolida synthetic ee xoog siligga sare waxaa lagula talinayaa, iyada oo la bixinayo in isticmaalaha ogyahay astaamaha, faa'iidooyinka iyo xaddidaadaha qalabkan tolmo oo adeegsanaya dhaqanka qalliinka wanaagsan.
5.Sixir aan xadi lahayn
Monofilament, bir bir ah, tollayn aan la nuugi karin.
Dareen-celinta infakshanka ayaa yar.
Xoog siliggu waa joogto.
Koodhka midabka: Calaamadda Gray （PANTONE 7539C）.
Inta badan loo adeegsado hababka loo yaqaan 'Ortopedic' oo ay ku jiraan Qalliinka Xidhitaanka Sternal.
Xoog siligga joogtada ah
Ductile iyo malleable.
Naqshadeynta gaarka ah ee cirbadaha aan dhibaatada lahayn.
Haddii isticmaaluhu garanayo astaamaha, faa iidooyinka iyo xaddidaadaha tolmoonka birta ah ee birta ah, iyo haddii isaga / iyadu ay aqoon u leeyihiin hababka qalliinka wanaagsan, adeegsiga sheygan ayaa ku filan habraacyada u baahan qalab aad u adkeysi badan, tusaale ahaan orthopedics, Xiritaanka Sternum, iwm. Guntinku wuxuu u baahan yahay farsamooyinka guntinta gaarka ah ee qalliinka ahama.
Hore: Xidhmada Gargaarka Degdega ah ee Gaarka ah ee Warshadda - Magaca-kaarka-caafimaadka-curcurka - WeiRui
Xiga: Tolmo la nuugo